မန်း​လေးမြို့ကြီးအကျဉ်းတန်​​နေပြီ . . အားလုံးလဲသွားလဲသတိ လာလဲသတိလေးနဲ့သွားလာကျပါ . – ရှအေလငျး
မန်း​လေးမြို့ကြီးအကျဉ်းတန်​​နေပြီ . . အားလုံးလဲသွားလဲသတိ လာလဲသတိလေးနဲ့သွားလာကျပါ .
မင်း မဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာကျနော်နေပါတယ်….အားလုံးလဲသွားလဲသတိ လာလဲသတိလေးနဲ့သွားလာကျပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်…..
မင်း မဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာကျနော်နေပါတယ်….
မ သွား နဲ့ မလာနဲ့လို့တော့ကျနော်မပြောလိုပါဘူး…ဒါပေမဲ့အရေးတကြီးသွားရမယ်ဆိုတော့သတိလေးနဲ့သွားလာကျပါ…ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သက်သက်ကြီးတော့မသွားကျပါနဲ့လို့ကျနော်အသိလေးပေးပါရစေချစ်သောမိတ်ဆွေ…
ကျနော် တို့ ညီကိုသူတို့နဲ့ရန်ညှိးရန်စလဲမရှိပါဘူးဗျာ ..အဲ့နေ့ကကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့အပြင်ထွက်မိတာပါ…ဘာရန်ညှိးရန်စမှမရှိပါဘူး….သက်သက်မဲ့ကိုလိုက်ပြီးလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ…ပထမတစ်ချက်ပစ်တော့သတိမထားမိဘူးသြော်ကားကဂဲနင်းမိလိုချော်မှန်တာပဲနေမှာပါဆိုထားလိုက်တယ်…
နောက် တစ်ချက် ခါးကိုမှန်တယ်..ဒါသွေးရိုးသားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ချိန်မျက်နှာကိုMaskအုပ်ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်၂စီးနဲ့လူ၆ယောက်အဖွဲ့ကကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်မောင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်နောက်ကနေကျနော်တို့ကိုလေးဂွတွေနဲ့ပစ်နေတော့တာပဲ…
ဒါနဲ့ ကျနော် ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်းတောင်းပန်တာပေါ့အကိုတို့ဘာလိုချင်လို့လဲဆိုင်ကယ်လိုချင်လို့လားဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံတို့လိုချင်လို့လားမေးတော့သူတို့ကမင်းစောက်ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားဆိုပြီးလေးဂွနဲ့ပါးစပ်ကိုပစ်လိုက်ပါတယ်…ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကွဲပြီးသွားတွေလဲကျွတ်ထွက်သွားပါတယ်..
အဲ့နာ နဲ့မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုပြီးသံလမ်းကျော်အောင်မောင်းပြီးလမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကူညီတောင်းပါတယ်..ကျနော်တို့လေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်နေလို့ကူညီပါဦးလို့ပြောတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကကျနော်တို့ကိုမျက်နှာလွဲဂဲပစ်မသိဟန်ပြုပြီးရှောင်တိန်းထွက်ခွားသွားကျပါတယ်…
အဲ့ အချိန် သူတို့အဖွဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးလေးဂွတွေနဲ့ပစ်ကျပါတယ်ကျနော့်ညီကတော့နောက်ကျောတပြင်လုံးသူတို့ပစ်တဲ့ဖန်ပေသီးအရာစက်ဘီးဂုန်းတွေမူလီတွေအစရှိတာတွေနဲ့ပစ်ခက်ချင်းကိုလဲခံရပါတယ်……
သူ့နေရာသူပြန်ထိုင်နေတယ်သူ့တာဝန်မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့စတိုင်ကြီးနဲ့လစ်သွားတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကျတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့နေရာထိလိုက်မေးတယ်….ကျနော်လဲဓာတ်မှန်သွားရိုက်မယ်အလုပ်ဘေးကပြောသံလေးကြားလိုက်တယ်….မနေ့ကလဲအဲ့လိုပဲလေးဂွနဲ့လိုက်ပစ်ခံရလို့အမှတ်( ၉ )ရဲစခန်းကိုသွားတိုင်တာတဲ့လေးဂွနဲ့ပစ်တဲ့အမှုတွေများ
မငျး မဲ့ တိုငျးပွညျကွီးမှာကနြျောနပေါတယျ….အားလုံးလဲသှားလဲသတိ လာလဲသတိလေးနဲ့သှားလာကပြါလို့မတ်ေတာရပျခံပါတယျ…..
မငျး မဲ့ တိုငျးပွညျကွီးမှာကနြျောနပေါတယျ….
မ သှား နဲ့မလာနဲ့လို့တော့ကနြျောမပွောလိုပါဘူး…ဒါပမေဲ့အရေးတကွီးသှားရမယျဆိုတော့သတိလေးနဲ့သှားလာကပြါ…ဘာမှမဟုတျပဲနဲ့သကျသကျကွီးတော့မသှားကပြါနဲ့လို့ကနြျောအသိလေးပေးပါရစခေဈြသောမိတျဆှေ…
ကနြျော တို့ညီကိုသူတို့နဲ့ရနျညှိးရနျစလဲမရှိပါဘူးဗြာ ..အဲ့နကေ့ကိစ်စလေးတဈခုရှိလို့အပွငျထှကျမိတာပါ…ဘာရနျညှိးရနျစမှမရှိပါဘူး….သကျသကျမဲ့ကိုလိုကျပွီးလေးဂှတှနေဲ့ဝိုငျးပဈခငျြးကိုခံခဲ့ရတာပါ…ပထမတဈခကျြပဈတော့သတိမထားမိဘူးသွျောကားကဂဲနငျးမိလိုခြျောမှနျတာပဲနမှောပါဆိုထားလိုကျတယျ…
နောကျ တဈခကျြ ခါးကိုမှနျတယျ..ဒါသှေးရိုးသားမဖွဈနိုငျတော့ဘူးဆိုပွီးနောကျလှညျ့ကွညျ့လိုကျအဲ့ခြိနျမကျြနှာကိုMaskအုပျဦးထုပျဆောငျးထားတဲ့ဆိုငျကယျ၂စီးနဲ့လူ၆ယောကျအဖှဲ့ကကနြျောတို့ညီကို၂ယောကျမောငျးလာတဲ့ဆိုငျကယျနောကျကနကေနြျောတို့ကိုလေးဂှတှနေဲ့ပဈနတေော့တာပဲ…
ဒါနဲ့ ကနြျော ဆိုငျကယျမောငျးရငျးတောငျးပနျတာပေါ့အကိုတို့ဘာလိုခငျြလို့လဲဆိုငျကယျလိုခငျြလို့လားဖုနျးနဲ့ပိုကျဆံတို့လိုခငျြလို့လားမေးတော့သူတို့ကမငျးစောကျပါးစပျကိုပိတျထားဆိုပွီးလေးဂှနဲ့ပါးစပျကိုပဈလိုကျပါတယျ…ကနြေျာ့နှုတျခမျးကှဲပွီးသှားတှလေဲကြှတျထှကျသှားပါတယျ..
အဲ့နာ နဲ့မဖွဈတော့ဘူး ဆိုပွီးသံလမျးကြျောအောငျမောငျးပွီးလမျးမှာရှိတဲ့လူတှအေကူညီတောငျးပါတယျ..ကနြျောတို့လေးဂှတှနေဲ့ဝိုငျးပဈနလေို့ကူညီပါဦးလို့ပွောတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူစိတျမရှိတဲ့လူတှကေကနြျောတို့ကိုမကျြနှာလှဲဂဲပဈမသိဟနျပွုပွီးရှောငျတိနျးထှကျခှားသှားကပြါတယျ…
အဲ့ အခြိနျ သူတို့အဖှဲ့ပွနျရောကျလာပွီးလေးဂှတှနေဲ့ပဈကပြါတယျကနြေျာ့ညီကတော့နောကျကြောတပွငျလုံးသူတို့ပဈတဲ့ဖနျပသေီးအရာစကျဘီးဂုနျးတှမေူလီတှအေစရှိတာတှနေဲ့ပဈခကျခငျြးကိုလဲခံရပါတယျ……
သူ့နရောသူပွနျထိုငျနတေယျသူ့တာဝနျမဟုတျဖူးဆိုတဲ့စတိုငျကွီးနဲ့လဈသှားတယျဘာမဟုတျတဲ့ကိစ်စလေးတှကေတြော့ဓာတျမှနျရိုကျတဲ့နရောထိလိုကျမေးတယျ….ကနြျောလဲဓာတျမှနျသှားရိုကျမယျအလုပျဘေးကပွောသံလေးကွားလိုကျတယျ….မနကေ့လဲအဲ့လိုပဲလေးဂှနဲ့လိုကျပဈခံရလို့အမှတျ( ၉ )ရဲစခနျးကိုသှားတိုငျတာတဲ့လေးဂှနဲ့ပဈတဲ့အမှုတှမြေား
လှူပါ.. မျှော်ကိုးပြီးမလှူပါနဲ့… ဝေဖန်အပြစ်တင်ဖို့ မလှူပါနဲ့… ပီတိအတွက် လှူပါ
လမ်းခွဲထားတဲ့ ခင်ပွန်းက သမီးကို လွမ်းတဲ့ အကြောင်းတင်ရင် ရယ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ မျိုးစန္ဒီကျော်
အောင်​မင်္ဂလာကားဝင်း ​က စိုးရိမ်​စရာဖြစ်​လာ
မကြာခင် ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မယ့် မြန်အိုင်ဒေါ Season4မှာ ပါဝင်မယ့်...
Shark သောက်ပြီး သိန်းတစ်ရာ ကံထူးသွားသူ မအေးဌေး
” ဖတ်ပီးရင် ဖျားသွားမယ့် ဆေးရုံက အသုပ်သည် နဲ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးရဲ့ အဖြစ်ပျက်...
ပင့်လက်သီးနဲ့ ငါးချီမြောက်မှာ အနိုင်ယူလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်းရဲ့...